Image | Formats | QEERROO
September 27, 2021 by Qeerroo
Adeemsa laafina sochii dargaggoota Oromoo!
mootummaa Itoophiyaa fi kaadiree isaa irratti hin dammaqamin!
Siyaasni tapha barbaada. Tapha sana injifachuuf mala si feesisa. Mala garaagaraa uumtee tapha caallaan mormitootakee salphaatti injifatta jechaadha.
Mootummaan Itoophiyaa adeemsa gurguddaa ittiin qabsoo dargaggoota Oromoo duuba deebisuuf yaale qaba. Adeemsi kun kan irratti dammaqamaniif hin dammaqamin qabu. Amma kan ilaaluuf deemnu adeemsa irratti hin dammaqamin sana ilaaluu yaalla.
1. Sammuu dargaggootaa gara yaada qabsoo bilisummaa irraa haqaanqaluu!
1.1 olmaa dargaggootaa
Qabxii kana jalatti wantoota hedduu raawwate. Kun kan bara bulchiinsa EPRDF aangoo TPLF jala ture irraa eegale. Bara bulchiinsa aangoo TPLF magaalaalee keessatti “olmaa dargaggootaa” waan jedhu hundeeffamuu jalqabe.
Olmaa Dargaggootaa kana keessa wantoota akka Puulii, Tenesii, DS TV, buufataalee Jimaa, bufaata Tamboo turan. Wantoonni kun haala salphaa ta’een dargaggoota injifachuu qabxii jedhu jalaa fudhatame. Adeemsa kana keessa dargaggeessi seenu araadaan qabama. Araada kana keessatti dargaggeessi kufe waa’ee saba isaa dhiisii waa’ee jireenya mataa isaa yaaduuf hiree hin argatu.
Haala kanaan sammuu dargaggootaa gara aaraada hin feesifneetti oofuudhaan guuboo araadaatti dargaggoota hedduun nam’aniiru. Dargaggeessi geengoo kana keessa seene sammuun isaa waan Jimaaf Tamboo qofa argatee jennaan jireenyi isaaf jannata. Kun of dagachuu, of wal’aaluu, namummaa ofii awwaaluu keessaa isaan tokko.
1.2. Gartuu beeksisaaf wal arboomsuu
Bara kana ammoo gurmuu hojii uummataa waan hojjetu fakkaatutu uumame. Gurmuun kun miidiyaa dhuunfachuu, miidiyaatti fayyadamuu haalaan danda’a. Dargaggoota fayyaaleyyiis osoo isaan hin beekin ofitti makuuf dandeettii qaba.
April 13, 2021 by Qeerroo
Mallattoo Filmaata Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)
February 4, 2021 by Qeerroo
October 12, 2020 by Qeerroo
Dhaloota Hojii Muldhataan Jireenya Saba Oromoo Jijjiiran./Aadde Toltuu Tufaa
December 18, 2013 by Qeerroo
December 12, 2013 by Qeerroo
Gabaasaa Haala Kabaja Ayyaana Irreecha Harsadii fi Shira Ummata Oromoo Irratti Deemaa Jiru.
“ Hunda irra waan nama dhibuu uumata keenyas guddoo aarsee jiru keessaa inni guddaan, guyyuma uumanni Oromoo Irreecha kabajatu Warri Habashaa magaalaa Finfinnee keessatti hiriira bahanii turan,Muutummaan Wayyaanee nama irraa qabdee hiite hin agarre.Ammoo Oromoo nagaan malkaa isaa irratti Irreefachuuf deemu karaatti qabdee hiraarsuu fi mannen hidhaatti guuraa turte. Gidiraan daangaa dhabeessi akkasii hamma yoomiittii??”” Gabaasa Qeerroo Bilisummaa
Gabaasa Qeerroo Fulbaana 30,2013 Finfinnee
Akkuma beekamu akka biyyoleessattis tahee akka addunyaatti kan beekamaa jiru guyyaan kabajaa ayyaana irreeffannaa magaalaa Bishooftutti Fulbaana 29 xmuramanee jira. Akkuma Qeerroon dursee uummanni Oromoo nageenyaan irreeffatee gara manaa isaatti galu labsama ture kanaan durfamee uummanni Oromoo hora Harsadee kana irratti nageenyaan irreeffatee milkaa’ee jira.Haata’u malee akkuma amaleeffate mootummaan wayyaanee guyyaa kana ilmaan Oromoo hidhuuf akeekkatee ka’ee jira kun duras kan guyyoota ayyaana oromoo irratti dargaggoota Oromoo hidhuun gidirsaa turuun isaa kan haalamu miti. Shakkii fi sodaa isaa irraan kan ka’e uummata bal’aa guyyaa jala bultii irraa kaasee hanga Fulbaana 29 tti magaala Bishooftuu fi naannoo isheetti konkolaataa dhaabsisuun korojoo uummataa hanga borsaa isaaniitti sakattaasisaa turuun isaa ifaadha. Akka karoora mootummaa wayyaanee irreecha baranaa kana irratti qophiin isaanii ciminaan akka irratti qophaayaa ture keessattuu dargaggoota oromoo hidhuuf karoorsee akka ture gama caasaa mootummaatiin odeessi isaa nugahaa tureera. Uummata Oromoo hora Harsadee kana irratti argaman gidduutti haala adeemsaa fi yaada uummataa kan toohatan huccuu civil fakkeessuudhaan tikoota isaa uummata keessa tamsaasee akka ture hubatamaa dha.Ilmaan Oromoo doorsisaa fi akeekkachiisa inni mul’isaa ture kanaaf sodaa fi boodatti jechuu malee uummanni bal’aan kuni ayyaanicha jalabultii irraa eegaluun haala oo’an kabajanii oolanii jiru.
Guyyaa; Fulbaan 29 uummanni Oromoo magaalaa Bishooftuu,Dukaam Sabbataa fi bakkoota adda addaa akkasuma daandii gubbaa asii fi achi socho’uudhaan sirboota aadaa fi seena uummata bal’aa faarsu weellisuun maalummaa fi sabbonummaa uummata oromoo kabachiisaa fi beeksisaa turaniiru. Sirboota aadaa uummata oromoo keessaa kan weellifamaa turan keessaa:
Guutummaa Gabaasa Kanaa Dubbisuuf:– Gabaasa haala Irreecha harsadee 2013
September 30, 2013 by Qeerroo
Barattoota Oromoo Wayyaaneen Yakkamanii Yuuniversitii Irraa Arihaman Keessaa Hamma Tokko.
March 1, 2013 by Qeerroo